Warar - Helitaanka Mashiin Karaoke ah oo Heeso lagu luuqeeyo
Haddii aad ka fekereyso inaad gurigaaga ka sameysato mashiin karaoke ah, waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso waxyaabo yar. Haddii aad rabto inaad awood u yeelatid inaad ku heesato heesaha aad jeceshahay oo ay dadku kaa fogaadaan, markaa waa inaad dhammaantiis aaddaa Soo hel mashiinka karaoke ee ugu wanaagsan oo ay la socdaan heeso aad jeceshahay oo dadku ku raaxeysan doono. Waxaad sidoo kale ubaahantahay inaad soo iibsato mashiinka karaoke ee saxda ah nooca dadka aad rajeyneysid inaad soo muuqatid. Tani waa wax ay tahay in si taxaddar leh looga fikiro.
Dad badan ayaa u maleynaya in iibsashada mashiinka karaoke ee ugu tayada fiican ay ka dhigan tahay in lagu qasbi doono inay iibsadaan heeso aysan jecleyn. Hees kastaa uma shaqeyn doonto qof walba, sidaa darteed waxaad u baahan tahay inaad soo qaadato heeso aad u badan tahay inaad awoodid inaad la heesato. Xusuusnow inaad lacag ku bixin doontid tan, waana inay noqotaa wax aad ku raaxeysan doonto. Haddii aadan haysan waqti ama niyadsami aad ku xulan karto heesahaaga, markaa isku day inaad hesho mid leh muusig caan ah. Way ku kacaysaa xoogaa intaas ka badan laakiin way u qalantaa
Waxa soo socda ee laga fikiro waa inta jeer ee aad isticmaali doontid mashiinka karaoke. Ma qorsheysaa inaad ku isticmaasho gurigaaga ama naadiga? Haddii aad qorsheyneyso inaad dadka ka badato habeennada karaoke, markaa waxaad u badan tahay inaad rabto inaad soo iibsato mashiin karaoke ka fiican oo heeso badan oo aad kala dooran karto ah. Dhinaca kale, haddii aad rabto inaad hubiso inaad had iyo jeer heysato heeso muusig oo weyn, waxaad ubaahan kartaa inaad iibsato mashiin caadi ah oo hal heeso xul ah.
Dhawaaqa mashiinka karaoke waa muhiim sidoo kale. Waa inuu noqdaa mid cad oo la maqli karo. Hubso inaad tijaabiso marka ugu horreysa ee aad hesho si aad u hubiso inay u egtahay mid fiican. Sidoo kale, hubi in muggu aanu aad u sarreeyn. Uma baahnid inaad kudhamaato dhageysiga heesaha aadan ku qanacsaneyn.
Ugu dambeyntiina, waa inaad go'aan ka gaartid haddii aad doorbidi lahayd CD-ga CD-ga ama cayaaryahan karaoke lagu daray. Ciyaartoyda CD-du badanaa way ka jaban yihiin waana sahlan yihiin in la isticmaalo. Mashiinnada Karaoke way qaali noqon karaan maxaa yeelay waxay u baahan yihiin in si xirfadaysan loo dhiso. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira degello internet oo qaarkood bixiya kuwo bilaash ah. Haddii ay dhab kaa tahay inaad mid iibsato, tani waxay noqon kartaa hab fiican oo lacag lagu keydsado.
Helitaanka mashiin karaoke ah oo leh heeso lagu gabyo ma adka. Laakiin go'aan ka gaarista midka adiga kugu habboon ayaa ah. Ka fikir waxa aad ka rabto mashiinka iyo waliba qiimaha ay ku kacayso. Haddii aad tahay qof guriga uun ku isticmaali doona, markaa CD player ayaa ugu fiican. Haddii aad jeceshahay inaad baxdo oo aad qoob-ka-ciyaartid, markaa waxaa laga yaabaa in qalabka CD-ga uu kugu habboon yahay adiga. Marka aad gaarto go'aanadan, waxaad diyaar u tahay inaad bilowdo raadinta!